Ọ na -esiri Sony ike: ugbu a Sony Mobile Communications AB akwụsịla | Androidsis
Sony Mobile Communications AB na-akwụsị dị ka ụlọ ọrụ
una ezigbo akụkọ siri ike maka ndị Sony. Ma ọ bụ na arụmọrụ nke Sony Mobile na-ahapụ enweghị isi ụlọ ọrụ ya abụọ. Otu dị na Japan na nke ọzọ na Sweden. Anyị nwere ike ịkpọ nke dị na Japan dị ka ụlọ ọrụ akpọrọ Sony Mobile Communications Inc na nke dị na Sweden dị ka Sony Mobile Communications AB.
Ọ bụrụ n you nwere ụlọ ọrụ na Sweden ọ ga-eme ya na ihe ruru Sony Ericsson na na site ugbu a gaa n'ihu, ha agakwaghị anọ na ụlọ ọrụ Korea. Emeela ọtụtụ afọ nke teknụzụ dị egwu na nkewa ahụ nke nwere mmalite nke ihe karịrị ekwentị ndị a ma ama.
Akụkọ mpaghara dị na Sweden ekwuola na officelọ ọrụ Lund na-egbutu ọrụ karịrị 60. Ndị nọ n'ihe egwu ahụ bụ ndị injinia na ndị otu nkwado ngalaba na - ahụ maka ekwentị na Sweden. Ma nke a bụ akụkụ nke mmemme mkpanaka Sony Mobile nke chọrọ iwepụ ụgwọ site na ọkara site na ngwụsị ọnwa Machị na-esote afọ.
E kwupụtara ọnwụ 200 ọzọ n'afọ gara aga, ya mere e nwere ngụkọta nke mmadụ 260 ndị na-emetụta he. Ugbu a, enwere ihe dị ka 100 na-arụ ọrụ na nnukwu Research & Development otu, ebe ọzọ 50 agafewo na ọrụ na Network Communications.
Ka ọ were Sony Mobile Communications AB na-emechi ndị ọrụ niile ngwa ngwa na-abanye na nkwekọrịta ọhụrụ na Sony Nordic iji bụrụ akụkụ nke ndị otu Sony arụmọrụ Europe. N’aka ozo, Sony n’aghari idozi onwe ya iji nwaa ibu mpi. Anyị ga-ahụ ebe ihe niile a bụ, ma ọ bụ ọnwa ole na ole gara aga mgbe ọtụtụ n'ime e mechiri ngwa maka ekwentị ha rue mgbe ebighebi. Na ụfọdụ ezigbo mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony Mobile Communications AB na-akwụsị dị ka ụlọ ọrụ
Ihe dị mma ma dị egwu nke Crazy Shapes platform bidoro ugbu a
Otu esi lelee ụbọchị njedebe nke nguzo na inlọ Ahịa Google: ọ na-apụ n'anya mgbe otu afọ na-enweghị ọkwa ọkwa